Amaflethi Ukuthengisa Nokuqasha ePakistan
IPakistan, ngokusemthethweni i-Islamic Republic of Pakistan, iyizwe eliseNingizimu Asia. Kuyizwe lesihlanu elinabantu abaningi emhlabeni elinabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-212,2. Ngokuyindawo, yizwe elikhulu impela lama-33, elingama-881,913 amakhilomitha skwele (amamayela angama-340,509). IPakistan inogu olungamakhilomitha ayi-1,046 (amamayela angama-650) ogwini lwase-Arabian kanye ne-Gulf of Oman eningizimu futhi ihlangana neNdiya empumalanga, i-Afghanistan ngasentshonalanga, i-Iran ngasentshonalanga eseningizimu, neChina kuya empumalanga esenyakatho. Ihlukaniswe kancane neTajikistan yiWakhan Corridor wase-Afghanistan enyakatho-ntshonalanga, futhi ibuye ihlanganyele nomngcele wemashi ne-Oman. Insimu manje eyakha iPakistan kwakuyindawo yamasiko amaningana asendulo futhi yayihlangana nomlando wokuqanjwa okubanzi kwamaNdiya. Umlando wasendulo ubandakanya indawo yeNeolithic yaseMehrgarh kanye neBronze Age Indus Valley Civilization, futhi kamuva yaba yikhaya imibuso ebuswa ngabantu bezinkolo namasiko ahlukile, kufaka phakathi amaHindu, ama-Indo-Greeks, amaSulumane, amaTurco-Mongols, ama-Afghans namaSikh. Le ndawo ibuswe imibuso eminingi kanye namaDynasties, kufaka uMbuso WasePheresiya WasePersia, u-Alexander III waseMacedon, uMbuso WaseSeleucid, uMbuso WaseMaurya waseNdiya, uMbuso wamaKushan, uMbuso wakwaGupta, i-Arab Umayyad Caliphate, iGhurid Sultanate, iGhaznavid Ubukhosi, iDelhi Sultanate, uMbuso wamaMongol, uMbuso wamaMughal, uMbuso wase-Afghan Durrani, uMbuso weSikh (ngokwengxenye) futhi, muva nje, iBritish Indian Kingdom.Pakistan yadalwa ngesikhathi sokuhlukaniswa kweNdiya njengesifunda esinamaSulumane. Kuyizwe elihlukehlukene ngokokuziphatha nangolimi, elinendawo efanayo nokwezilwane zasendle. Ekuqaleni umbuso, iPakistan yamukela umthetho-sisekelo ngonyaka we-1956, yaphenduka izwe lamaSulumane. Impi yombango yobuhlanga kanye nokungenelela kwamasosha aseNdiya ngo-1971 kwaholela ekuvunyelweni kwe-East Pakistan njengezwe elisha laseBangladesh. Ngo-1973, iPakistan yamukela umthetho-sisekelo omusha owabeka ukuthi yonke imithetho kufanele ihambisane nemikhuba ye-Islam njengoba ibekwe kwi-Quran naseSunnah. Ngo-2008 iPakistan yashintshela ekubuseni kwabantu. Kusukela ngo-2010 iPakistan iyiphalamende elinezinketho zokhetho ngezikhathi ezithile.Amandla aphakathi nendawo, iPakistan inamabutho ahlomile okwesithupha ngobukhulu emhlabeni futhi ingamandla enuzi kanye nombuso omenyezelwe wezikhali zenuzi. Kubalwa phakathi kwezomnotho ezivelayo futhi eziholela phambili ekukhuleni komhlaba, futhi ixhaswa ngesinye sezindawo ezikhulukazi nezihamba phambili emhlabeni jikelele. Umlando wezepolitiki wasePakistan selokhu uzibuse ubonwe ngezikhathi zokubusa kwamasosha, ukungazinzi kwezepolitiki kanye nezingxabano neNdiya. Izwe liyaqhubeka nokubhekana nezinkinga eziyinselelo, kufaka phakathi abantu abaningi, ubuphofu, ukungafundi kanye nenkohliso. IPakistan iyilungu le-UN, iShifi Cooperation Organisation, i-OIC, i-Commonwealth of Nations, i-SAARC, i-Islamic Military Counter Terrorism Coalition, futhi iyinhlangano ebanzi engeyona ye-NATO.